Ogaden News Agency (ONA) – Qaxootiga xearada Kharaz oo ku banaabaxay xafiiska UNHCR
Qaxootiga xearada Kharaz oo ku banaabaxay xafiiska UNHCR
Ugu yaraan 2oo oo qoys oo ku ahaa qaxooti Xerada Kharaz ee dalka Yemen ayaa saaka ilaa waqtigan xaadirka ah hordhooban xafiiska UNHCR-ta ay ku leedahay halkaa. Dadkan banaabaxaya ayaa soo xidhay guryahoodii oo dhamaantood caruur iyo carooleba soo hordhoobtay xafiiska UNHCR ee xerada Kharaz.
Dadka banaabaxaya oo ka soo qaxay dhibaatada lagu hayo shacabka Ogadenya ayaa dalbanaya in la siiyo xuquuqda qaxootinimo ka dib markii ay arkeen in masuuliinta xerada ay ula dhaqmayaan si ka baxsan xeerka qaxootinimo. Waxyaabaha ay tusaale ahaanta u soo qaateen ayaa waxaa ka mid ah in dadka ka yimaada Ogadenya aan la siinin wax ka badan raashin hal maalin ku filan marka ay soo galaan xerada, meesha qaxootiyada kale laga siiyo raashin ku filan 5maalin.
Arimaha kalee ay ka mudaaharaadayaan qaxootiga Ogadenya ayaa waxaa ka mid ah in aan shaqada ka socota xerada aan qayb laga siinin marka la qorayo, sidoo kale in aan lagu darin qaxootiga Somalida oo la doonayo in lagu celiyo dalkoodii.
Qaxootiga ka soo galay Ogadenya ayaa markay xerada yimaadeen waxaa la siiyay aqoonsiyo muujinaya inay yihiin qaxooti ka soo barakacay Ogadenya. Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan dadka isugu soo baxay banaabaxa ayaa waxaa ka mid ah iyadoo la doonayo in wax laga badalo aqoonsiga (Refugees Status) ay ku joogaan xerada oo laga dhigo dad Itobiyaan ah oo soo qaxay, taasoo hadafka ka dambeeya uu yahay in dawladda Itobiya lala kaashado sidii dib loogu celin lahaa.
Waxay dadka soo banaabaxay oo sheegay in aanay dib ugu noqonaynin guryihii iyo teendhooyinkii ay ku jireen inta laga xalinayo arimahooda ay si gaar ah uga cabanayaan masuuliyiin Somali ah oo la shaqeeya ninka ugu sareeya xerada Emmanuel Uwurukundo kuwaasoo siyaabo aan fiicnayn uga tarjuma xaaladooda.
Masuuliinta HAD u qaabilsan arimaha qaxootiga iyo samafalada ayaa dacwado u gudbiyay hadda ka hor xafiiska UNHCR ay ku leedahay dalka Swiss lana socodsiiya xaaladda qaxootiga S.Ogadenya oo loola dhaqmo siyaaba aan haboonayn oo xeerka caalamiga ee qaxootiga ka baxsan.